दरबार हत्याकाण्डबारे आफन्तकै गम्भीर आरोप– विरेन्द्र मार्ने दिपेन्द्र नै हुन् भने उनैलाई किन राजा बनाइयो ? « News24 : Premium News Channel
दरबार हत्याकाण्डबारे आफन्तकै गम्भीर आरोप– विरेन्द्र मार्ने दिपेन्द्र नै हुन् भने उनैलाई किन राजा बनाइयो ?
काठमाडाैं । कलाकार निर शाहका दाजु खड्गविक्रम शाह राजा विरेन्द्रका भिनाजु हुन् । उनै खड्गविक्रम पनि २०५८ सालको हत्याकाण्डामा मारिए । तर, निर शाह दरबार र त्यहाँ भएका हत्याकाण्डलाई स्वभाविक मान्दैनन् । उनले दरबारलाई सामान्य विषय जटिल बनाइदिने र षडयन्त्रको मूल थलोको रुपमा बुझेका छन् । उनै शाहकसँगअन्नपूर्ण पोष्टका लागि पत्रकार नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानी यस्तो छ :
केशव भट्टराईको सिनेमाले ५१ औं दिन पार गरेको खुसीयालीमा आयोजित समारोहमा म चलचित्र विकास कम्पनीमा थिएँ। रात छिप्पिँदै थियो, हामी रमाइलो गरिरहेका थियौं। अचानक राति ९स् ३० बजे मलाई एउटा फोन आयो(वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालबाट।
मलाईसमेत त्यस घटनाबारे जानकारी दिइएको थिएन। सबै घटना लुकाइएको थियो । मेरा दाजु राजा वीरेन्द्रका भिनाजु हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले उक्त रात आयोजना गरिएको पार्टीमा उहाँ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । जेठ १९, राति ९ः१५ बजे १
मेरा दाजु खड्कविक्रम शाह हाम्रो अभिवाक हुनुहुन्थ्यो । पिताजीको देहान्तपछि उहाँले नै हाम्रो परिवारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको थियो । मेरा हरेक क्रियाकलाप उहाँले नजिकदेखि नियाल्दै आउनुभएको थियो । नेपालको इतिहासमै भएको ठुलो हत्याकाण्डमा मेरा दाजु र भाउजुको पनि हत्या भएको थियो । राजदरबार हत्याकाण्डले चर्चित त्यो रात मेरा लागि जीवनकै भयावह रात हो । तर, ममाथि त अर्को बिहान पनि व्रजपात हुन बाँकी नै थियो । त्यो घटना सुनेर आमाको पनि देहान्त भयो । जेठ २०, दिउसो ३:३० बजे
मलाई आश्चर्य लाग्छ, दाजु(भाउजुको पोस्टमार्टम नै गरिएन, किन रु हत्या भएको जान्दाजान्दै पनि उहाँहरूको पोस्टमार्टम नगरिनुको खास कारण के थियो रु जबकि दाइ(भाउजुभन्दा पनि विशिष्ट व्यक्तिहरू मारिएका थिए। दाजु(भाउजुको मृत्युले थोरै पनि महत्व पाउन सकेन । हाम्रा लागि त्यो अकल्पनीय कुरा थियो।
त्यो समय अर्को पनि अनौठो घटना भयो । जसले हत्या गरेको हो भनियो, उसैलाई राजा घोषणा गरियो किन यदि हत्याकाण्ड मच्चाउने दीपेन्द्र नै हुन् भने राजालाई मार्ने मानिस राजा हुन पाउँछ त्यस अकल्पनीय समयलाई अभिव्यक्त गर्ने शब्द मसँग छैन । यसबारे धेरै कुरा गर्न मन पनि लाग्दैन । तर, मानिसहरू यसैलाई कोट्याइरहन चाहन्छन्।।।।
जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहुनु दरबारको ठुलो दुर्भाग्य हो। पछि राजाका रूपमा ज्ञानेन्द्र उदाए, उहाँबाट त्रुटि नै त्रुटि भए। एउटा गल्तीलाई छोप्न धेरै गल्ती उनले दोहोर्‍याए। समयले नै मुल्यांकन गरिसकेको मानिसबारे मैले के मुल्यांकन गर्नुरु तर, किङ वीरेन्द्र वाज अ भेरी गुड हार्टेड म्यान। त्यसमा कुनै शंका छैन। म उहाँलाई असल हृदय भएको मानिसका रूपमा सधैं सम्झिरहन्छु । तर, राजनीतिज्ञको रूपमा भने उहाँ असफल मान्छे हो ।